‘कुटुमा कुटु’ सर्वाधिक पटक हेरियो, ‘२ रुपैयाँ’ कस्तो चल्यो ? « Ramailo छ
‘कुटुमा कुटु’ सर्वाधिक पटक हेरियो, ‘२ रुपैयाँ’ कस्तो चल्यो ?
फिल्म ‘दुई रुपैयाँ’ मा समावेश ‘कुटुमा कुटु’ गीतलाई युटुवमा सर्वाधिक धेरै पटक हेरिएको छ । राजनराज सिवाकोटीको स्वर, संगीत तथा शब्द रहेको यो गीतलाई अपलोड भएको तीन महिनामा दुई करोड १९ लाख भन्दा बढी पटक हेरिएको छ । सर्वाधिक बढी पटक हेरिएको फिल्म ‘२ रुपैयाँ’ ले सार्वजनिक प्रदर्शनमा चाहिं कस्तो व्यापार गर्यो त ?
निश्चल बस्नेत र आशिफ शाह स्टारर फिल्म ‘दुई रुपैयाँ’ ले शुक्रबारको तुलनामा शनिबार उत्साहप्रद व्यापार गरेको छ । सार्वजनिक बिदाको दिन यो फिल्मले देशका कतिपय हलहरुमा हाउसफूलको व्यापार गर्यो । क्युएफएक्स अन्र्तगतका हलहरु सर्वाधिक २४ शो पाएको दुई रुपैयाँले शनिबार ९० प्रतिशत अकुपेन्सी कायम गरेको रिपोर्ट छ । शनिबार नायक आशिफ शाह र फिल्मको टिम राजधानीका विभिन्न हलहरुमा घुमेको थियो । फिल्मले दुई दिनमा दुई करोड भन्दा बढीको व्यापार गरेको रिपोर्टहरु सार्वजनिक भैरहेका छन् । निश्चल र अशिमसँग गरिएको रमाईलो कुराकानी हेर्नुस् :
अशिम शाहको निर्देशन रहेको फिल्ममा निश्चल र आशिफसँगै बुद्धि तामागं, मेनुका प्रधान, राजन इशान लगायत कलाकाहरुको अभिनय छ ।